Fanaraha-maso kalitao - Fitaovana fiarovana ny tontolo iainana Xingtejia Manufacturing Co., Ltd.
Ny ekipan'ny Metallurgists sy ny injenierantsika dia hiantoka anao hanana fahatokisana tanteraka ny vokatra natolotra.
Ny laboratoara fanaraha-maso sy fitiliana anay dia manome Metallographic, mekanika, dimensional, fitiliana simika, sns.
Hamboarinay ny fitondrana Inspection sy fitsapana hahafeno ny fepetra takinao. Ny drafitra kalitao dia miainga amin'ny fanandramana mahazatra ka hatramin'ny fanamarinana sy ny fanarahana taratasy feno.
Manolotra serivisy fanandramana manimba sy tsy manimba izahay, anisan'izany ny:
1. Miara-mamantatra milina CMM
3. Fanaraha-maso sombiny andriamby
4. Fanaraha-maso Die Penetrant
5. Fanadihadiana momba ny simika eran-tany
6. Fitsapana amin'ny kofehy
7. Fitsapana ny famatrarana
8. Fanandramana Bend
9. Fitsapana mafy
Aorian'ny metaly dia atsonika amin'ny vy anidina. Mampiasa spectrometer izahay mba hizaha toetra ny vy amin'ny vy narendrika alohan'ny fanariana mba hahazoana antoka fa manana ny lanjan'ny vy marina ireo vokatra.
Fanaraha-maso ny refy
Ny fanaraha-maso ny refy dia miankina amin'ny sary handrefesana raha toa ny refy fanariana dia ao anatin'ny elanelana fandeferana, mba hahitana ny lesoka amin'ny endrika sy refy. Ho fanampin'izay, ny fizahana ny toeran'ny datum masinina, ny fizarana ny famelana ny masinina ary ny fanodinana ny hatevin'ny rindrina dia tokony hojerena tsara.
Fanaraha-maso sombiny manintona (MPI)
MPI dia fizahana fanandramana tsy manimba (NDT) hahitana ny tsy fitoviana ambanin'ny tany sy ambany amin'ny fitaovana ferromagnetika toy ny vy, nikela, kobalta, ary ny sasany amin'ireo alloys-ny. Ny fizotrany dia mametraka sahan'andriamby amin'ilay ampahany. Ny sombin-javatra dia azo aolaka amin'ny alàlan'ny fanamafisana mivantana na tsy mivantana. Ny fanamafisana mivantana dia mitranga rehefa ampitaina amin'ny alàlan'ny zavatra fanandramana ny herinaratra ary miforona eo amin'ilay fitaovana ny sahan'andriamby. Ny fanetsehana ankolaka dia misy rehefa tsy misy ny herinaratra mandalo ilay zavatra andrana, fa misy sahan'andriamby avy amina loharano ivelany. Ny tsipika hery misy ny andriamby dia mifandraika amin'ny làlan'ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra, izay mety ho arus ankehitriny (AC) na endrika iray mivantana ankehitriny (DC) (AC namboarina).
Fitsapana ultrasonic (UT)
UT dia fianakaviana teknikan'ny fanandramana tsy manimba mifototra amin'ny fampielezana ny onja ultrasonic amin'ny zavatra na fitaovana voasedra. Amin'ny ankamaroan'ny fampiharana UT mahazatra indrindra, ny onjam-peo ultrasonika fohy dia fohy miaraka amina afovoany manomboka amin'ny 0,1-15 MHz, ary indraindray hatramin'ny 50 MHz, dia ampitaina amin'ny fitaovana hahitana ireo lesoka anatiny na mba hampiavaka ireo fitaovana. Ohatra iray mahazatra ny fandrefesana ny hatevin'ny ultrasonika, izay mizaha toetra ny hatevin'ny zavatra andrana, ohatra, mba hanaraha-maso ny harafesin'ny fantson-drano.
Ny hamafisana dia ny fahaizan'ireo fitaovana manohitra ny tsindry ataon'ny zavatra mafy kokoa amin'ny habeny. Araka ny fomba fitsapana isan-karazany sy ny isan'ny fahaiza-mampifanaraka dia azo zaraina ho amin'ny hamafin'ny Brinell, hamafin'ny Vickers, hamafin'ny Rockwell, hamafin'ny micro Vickers, sns. toetra samy hafa.
Fitsapana an-tsary (RT)
(RT na X-ray na Gamma ray) dia fomba fitsapana tsy manimba (NDT) izay mandinika ny habetsaky ny santionany. Radiography (X-ray) dia mampiasa taratra X sy taratra gamma mba hamoahana tarehintsoratra misy santionany, mampiseho ny fiovan'ny hateviny, ny kileman-toetrany (anatiny sy ivelany), ary ny antsipirian'ny fivoriambe hiantohana ny kalitao mety indrindra amin'ny asanao.
Fanandramana momba ny fananana mekanika
Ny orinasanay dia manana milina 200 taonina sy milina 10 taonina. Azo ampiasaina hizaha toetra ny mekanika ny vokatra manokana sasany.
Kalitao avo lenta sy zotra no tanjona tadiavinay hatrany. Ny fanamafisana ny mpanjifa no hery manosika antsika handroso hatrany. Taorian'ny niainanay ny varotra iraisam-pirenena nandritra ny folo taona mahery, dia nanatsara ny fifehezana ny kalitaon'ny casting izahay. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nitombo be izahay fitaovana fanandramana mandroso toy ny milina fanandramana 200/10 Tonsile, fitaovana fitiliana Ultrasonic, fitaovana fizahana poti-Magnetika, fitaovana fitiliana lesoka X-ray, mpandinika firafitry ny simika roa, mpandinika ny hamafin'ny Rockwell sns. .